माया को रूप: कसरी पहिचान गर्ने | स्टाइलिश पुरुषहरू
प्रेम को देखिन्छ: तिनीहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने
एलिसिया टोमेरो | 10/06/2022 10:00 | जोडी र सेक्स
आँखाहरू दृष्टिको भावनाको अंश हुन् र तिनीहरूलाई हाम्रो शरीरको भाषाको माध्यम बनाउँछ हामीले के महसुस गरिरहेका छौं व्यक्त गर्नुहोस्। यद्यपि यो अविश्वसनीय जस्तो लाग्न सक्छ, हाम्रो आँखाले संकेतहरू जनाउँछ जुन हाम्रो नजरले स्पष्ट हुन्छ तिनीहरू भावुक हुन सक्छन् तिनीहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने?
यस प्रकारको देखिन्छ हामीले विस्तृत रूपमा संकलित विचारहरु मध्ये केहि छन् विज्ञान द्वारा। यदि संयोगले तिनीहरू तपाईंले पत्ता लगाउन चाहनुहुने प्रकारका लुकहरू हुन् भने, यदि तपाईंलाई त्यो केटा वा केटी मनपर्छ भने, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं पनि तिनीहरू आफैले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छन्।
1 माया लाग्छ, कसरी चिन्ने ?
2 त्यहाँ अन्य प्रकारका लुकहरू के छन्?
3 व्यक्तिपरक रूप
4 जब तपाईं रोमान्स सुरु गर्न चाहनुहुन्छ
5 जब तपाईं आफ्नो आँखा संग फ्लर्ट गर्न चाहनुहुन्छ
माया लाग्छ, कसरी चिन्ने ?
एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग प्रेममा हुन सक्छ, र अझै पनि यो तिनीहरूमा देखाउनेछ निरन्तर नजर, जब उसले तपाईसँग बोल्छ उसले तपाईलाई सीधा आँखामा हेर्नुहुनेछ। यो साँचो हो कि जुनून आफैंले अक्सर एक चाल खेल्छ, र सायद केहि अवसरहरूमा लाजले हामीलाई हाम्रो अनुहार फर्काउँछ। तर यदि तपाईंले ध्यान दिनुभयो भने, त्यो दृश्य फर्किन्छ, यदि अप्ठ्यारो परिस्थितिले वा कुनै रोचक बाह्य विषयलाई लिएको छ भने, अन्तमा उसले प्रत्यक्ष आँखा सम्पर्क गुमाउन सक्दैन।
के तपाईंले कहिले याद गर्नुभएको छ एक नजरले प्रकाश प्रसारण गर्छ? ठीक छ, त्यो अस्पष्ट रूप हो, जुन चासो प्रसारित गर्दछ, छ चमक, ऊर्जा, जब विद्यार्थीहरू फैलिन्छन्। खैर, यो त्यस्तो प्रकारको रूप हो जुन कसैले मनले माया गर्दा टाढा दिन्छ जस्तो देखिन्छ।
त्यहाँ अन्य प्रकारका लुकहरू के छन्?
त्यहाँ अन्य प्रकारका लुकहरू छन् जसले तिनीहरूलाई स्पष्ट गर्न सक्छ जोश वा चासोको क्षणहरू। जब तपाईं छेउमा हेर्नुहुन्छ, जब यो गहिरो हुन्छ वा जब तपाईं टाढा हेर्नुहुन्छ हामी यो कस्तो हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्छौं।
कुनै प्रकारको कुराकानीको बीचमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जब त्यो दृश्यले त्यो क्षण व्यक्त गर्न चाहन्छ: यदि तपाईंको आँखा दायाँ तिर सर्छ यो किनभने उसले केहि कल्पना गरिरहेको छ वा झूट बोलिरहेको छ।
Si आँखा माथि सर्छ जब उसले बोलिरहेको छ, यो किनभने उसले केहि सम्झन कोशिस गरिरहेको छ वा तिनीहरूले के भनिरहेका छन् भनेर ध्यान दिइरहेको छ।
कहिले त्यो नजर तल झुक्छ यो तब हुन्छ जब तपाईं भित्री भावनाहरूको नजिक पुग्न प्रयास गर्नुहुन्छ, ती भावनाहरूलाई पुन: सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको उपस्थितिबाट उहाँ उत्साहित वा उत्साहित हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् यदि यो फिर्ता जान्छ छविलाई अगाडि राख्नुहोस् र तिमीलाई हेर्छ किनभने जब उसले तपाईको बारेमा एकल विवरण पनि याद गर्दैन र तपाईलाई सुन्न चाहन्छ।
यदि त्यो व्यक्तिसँग छ आधा बन्द आँखा, यो किनभने यो ट्रिगर गर्न सक्छ कि उनी केहि वा कसैसँग रिसाएकी छिन्, उनी अपसेट हुन सक्छ। यदि यो लगातार झिम्किन्छ र उसले आफ्नो नजर राम्रोसँग ठीक गर्दैन, यो हुन सक्छ कि ऊ बेचैन छ वा उसले केहि लुकाइरहेको छ, यद्यपि त्यहाँ केसहरू छन् जहाँ उसले धेरै झिम्काउन सक्छ किनभने उसले मायामा छ भनेर लुकाउन खोज्छ।
त्यो नजरको व्याख्या गर्न सक्षम हुन तपाईंले अन्य प्रकारका इशाराहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ। यदि उसले तपाईलाई हेर्छ र मुस्कुराउँछउसको मुस्कान कस्तो छ हेर्नुहोस्। यदि उसको गाला उठ्छ र उसको आँखाको कुनाहरू चर्किन्छन् भने, त्यो व्यक्तिको कारण हो उनी तिम्रो उपस्थितिबाट उत्साहित छिन् र उहाँका भावनाहरू सत्य छन्।
त्यहाँ थप विवरणहरू छन्, उदाहरणका लागि, जब त्यो व्यक्ति उसले तिमीलाई माथि र तल हेरिरहेको छ यो किनभने उसले तपाईमा धेरै चासो देखाउँछ, तपाईलाई विश्लेषण गर्दछ र यसको मतलब एक आक्रामक र असहज रूप हुन सक्छ। तर, जब निरन्तर तपाईलाई आँखामा हेर्छ र तपाईलाई हावी भएको देखिन्छ यो तब हुन्छ जब त्यो व्यक्ति धेरै आत्म-विश्वासी हुन्छ, तिनीहरूसँग सधैं उच्च आत्म-सम्मान हुन्छ।
जब तपाईं रोमान्स सुरु गर्न चाहनुहुन्छ
हो त्यो नजर भित्र छ र सुरक्षा संग चार्ज छ, त्यो व्यक्ति कत्तिको चाखलाग्दो छ भनेर हामी अर्को पक्षबाट हेर्न सक्छौं। यो हो जब हामी पनि देखाउनेछौं कि हामी कस्तो प्रकारको रूपलाई व्याख्या गर्छौं किनभने वास्तवमा हामीलाई त्यो शक्ति र जीवन शक्ति मन पर्छ।
यो पनि हुन सक्छ कि व्यक्तिले हेर्न सक्दैन, तर उसले यो फट मा गर्छ, तत्काल वा सेकेन्डको अंशका लागि। यदि तपाईको नजर आराम छैन, तर केहि हदसम्म परेशान, उसले एक सेकेन्ड भन्दा अलि बढी हेर्छ र त्यसपछि ऊ टाढा जान्छ, किनभने त्यहाँ एक प्रकारको प्रेमको भावना हुन्छ।
Si उसले तपाईलाई एक सेकेन्ड भन्दा कम समयको लागि मात्र हेर्छ र त्यसपछि टाढा, एक्लै हेर्नुहोस् यसको मतलब तपाईलाई रुचि छ भन्ने हुन सक्छ। जे होस्, राम्रोसँग हेर्नुहोस् यदि त्यो सुन्दर मुस्कान उसको साथमा छ, किनकि यसले थप चासोको कुरा गर्नेछ।
जब तपाईं आफ्नो आँखा संग फ्लर्ट गर्न चाहनुहुन्छ
यदि तपाइँलाई प्रलोभन दिने हो भने, देखिन्छ तपाईंले लुकाउनुभएको उपहारलाई बढाउनुहोस्। आफ्नो प्रलोभनमा विवरण नगुमाउनुहोस् र तपाईलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्दा सधैं हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
तर यो आराम गर्नुहोस्, तपाईं आक्रमण गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईंको ठाउँ वा परेशान गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईं लामो समयसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि एक सेकेन्डको अंशहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाको स्तन नहेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यो तपाइँको मनपर्ने छैन। यदि तपाइँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यसलाई सावधानीपूर्वक गर्नुहोस् र अनुहारमा धेरै कुरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र आँखामा हेर्दै। दुबै लिंगका लागि पनि, उत्तेजक दृश्यहरू सुखद छैनन्, त्यो छोड्न सकिन्छ जब त्यहाँ अधिक आत्मविश्वास छ।
यद्यपि, मानिसहरू बीचको संचार शक्तिको विकास हुनुपर्छ, हामीले एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने प्रयास गर्नुपर्छ र अरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा गुमाउन दिनु हुँदैन: गैर-मौखिक भाषा।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » फिट » जोडी र सेक्स » प्रेम को देखिन्छ: तिनीहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने
ब्लेजर वा अमेरिकी?
एउटी महिलाले तिमीलाई मन पराउँछु भनेर कसरी लुकाउनुहुन्छ?